လျှပ်စစ်မိုတာ - ဝီကီပီးဒီးယား
(လျှပ်စစ် မော်တာ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
Motor operation the electric current that is fed intoacoil wrapped around soft iron on the spindle (rotor) causes the magnetism to either be sucked or repelled with the permanent magnet on the stationary (stator) or reverse or enter both places.
Different electric motors compared to 9V batteries.
Cross-section to show the stator of induction motor.
A type of pancake motor.
Rotor (left) and stator (right).
လျှပ်စစ်မိုတာသည်အလုပ်လုပ်နိုင်ရန်အတွက် လျှပ်စစ်ဓာတ်စွမ်းအင်ကို စက်၏ စွမ်းအားအဖြစ်သို့ ပြောင်းပေးသောကရိယာဖြစ်သည်။ လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် ခုတ်မောင်းရသော စက်အားလုံးလိုလိုမှာပင် လျှပ်စစ်မိုတာကို အသုံးပြုကြသည်။ အရွယ်အစားများမှာမူ ကိစ္စကိုလိုက်၍ သေးငယ်သောအရွယ်မှ အလွန်ကြီးမားသည့်အရွယ်အထိ အမျိုးမျိုးရှိကြပေသည်။ ခေတ်မီအလုပ်ရုံကြီးများရှိ စက်တိုင်းလိုလို၌ မိုတာတခုစီ တပ်ဆင်ထားတတ်ကြသည်ကို တွေ့ရ၏။ အသုံးပြုမည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို အလိုအလျောက် ဖန်တီးပေးသည့် စက်ကိုပင်လျှင် လျှပ်စစ်မိုတာဖြင့် လည်ပတ်စေသည်။
လျှပ်စစ်မိုတာပြုလုပ်ထားပုံနှင့် အလုပ်လုပ်ပုံသဘောမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အကြောင်းတွင် ရေးထားသည့်အတိုင်း လျှပ်စစ်ဒိုင်နမိုနှင့် ပြောင်းပြန်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒိုင်နမိုတွင်အာမေချာကို လည်စေခြင်းဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို ဖန်တီးပေးသည်။ လျှပ်စစ်မိုတာတွင်မှု လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို စီးဖြတ်စေခြင်းဖြင့် အာမေချာကို လည်စေသည်။ စက်များကိုလည်စေရာ၌ အသုံးပြုသောအခါ မိုတာမှ အာမေချာကို စက်ဝင်ရိုးနှင့် တိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ ဗယ်လတင်ခေါ် ခါးပတ်ကြိုးဖြင့်ဖြစ်စေ တနည်းတလမ်း ဆက်သွယ်ပေးရလေသည်။
လျှပ်စစ်မိုတာတွင် ဒီစီမိုတာနှင့်အေစီမိုတာဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ ဒီစီမိုတာမှာ ဒီစီကားရင့်ခေါ် တဖက်သတ်စီးကားရင့်ဖြင့်လည်သော မိုတာမျိုးဖြစ်၍ အေစီမိုတာမှာ အေစီကားရင့်ခေါ် တဖက်တပြန်စီး ကားရင့်ဖြင့်လည်သော မိုတာမျိုးဖြစ်၏။ ဤမိုတာနှစ်မျိုးတွင်တဖန် အမျိုးမျိုးအစားစား ရှိပြန်သေး၍ ယင်းတို့ အကြောင်းကိုအောက်တွင် ဆက်လက်ဖော်ပြထားသည်။
(၃) ကွန်ပေါင်းမိုတာဟူ၍ သုံးမျိုးရှိ၏။
ဆီးရီးမိုတာမှာ အသုံးအများဆုံးဖြစ်၍ ပြုလုပ်ထားပုံ သဘောမှာလည်း အလွယ်ဆုံးဖြစ်၏။ ဤမိုတာမျိုးတွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်သည် အာမေချာနှင့် ဖီးမက်ဂနက်ခေါ် အားပေးသံလိုက်တို့ကို ဆီးရီးနည်းဖြင့် ရှေ့စဉ်နောက်ဆက် စီးဖြတ်သည်။ မိုတာလည်ပုံမှာ လှည့်ပေးရသည့် ဝန်အားအနည်းအများကိုလိုက်၍ အနှေးအမြန်ရှိသည်။ သို့သော် မိုတာစ၍လည်ချိန်၌ လည်အားကြီး၏။ ဤမိုတာမျိုးကို ဓာတ်ရထား၊ မီးရထား၊ ဝန်တင်ဝန်ချမောင်း စသောလည်အားကြီးကြီးနှင့်စတင် ခုတ်မောင်းရမည့် စက်များတွင် အသုံးများကြသည်။
ရှန်မိုတာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို အာမေချာသို့ တလမ်း၊ ဖီးမက်ဂနက်သို့ တလမ်း နှစ်လမ်းခွဲ၍ ပရဲလဲနည်းဖြင့် ယှဉ်ပြိုင်စီးဖြတ်စေသည်။ ဤမိုတာမျိုးသည် ဝန်အားနည်းသည်ဖြစ်စေ၊ များသည်ဖြစ်စေ၊ ခပ်မှန်မှန်ပင် လည်တတ်လေသည်။
ကွန်ပေါင်းမိုတာမှာ အထက်ဖော်ပြပါမိုတာနှစ်မျိုးကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤမိုတာတွင် လျှပ်စစ်ဓာတ်သည် နှစ်လမ်းခွဲပြီးလျှင် တလမ်းက ဖီးမက်ဂနက်ကို လှည့်ပတ်စီးဖြတ်၍ ကျန်တလမ်းက အာမေချာနှင့် မက်ဂနက် နှစ်ခုစလုံးကို ရှေ့စဉ်နောက်ဆက် စီးဖြတ်သည်။ ဝန်အား ရုတ်တရက် တိုးလာသည့်တိုင်အောင် မော်တာအားလည်ပုံကို သိသာစွာ မထိခိုက်တတ်ပေ။ ထို့ကြောင့် ဆန်ကြိတ်စက်၊ ဂျုံကြိတ်စက် စသောဝန်အား ရုတ်တရက် တိုးလာတတ်သည့်စက်များတွင် ဤမိုတာမျိုးကို သုံးကြရလေသည်။
ဤမိုတာမျိုးတွင်လည်း အစားစားပင်ရှိ၏။ သို့သော်ပြုလုပ်ထားပုံ လွယ်ကူ၍ အသုံးအများဆုံး အမျိုးမှာ အင်ဒပ်ရှင်းမိုတာမျိုးဖြစ်သည်။ ဤမိုတာတွင်အာမေချာကို လျှပ်စစ်ဓာတ်ဖြင့် မည်သို့မျှ ဆက်သွယ်ထား ခြင်းမရှိပေ။ အေစီကားရင့်ကို ဖီးမက်ဂနက်တွင် စီးဖြတ်စေသောအခါ ဖီးမက်ဂနက်တွင်လည်ပတ်နေသော သံလိုက်နယ် ဖြစ်ပေါ်လာသည်။ ဤသံလိုက်ဓာတ်က တဖန်အာမေချာတွင် သံလိုက်နယ် ဖြစ်အောင် ညှိုပေးသည်။ ဖီးမက်ဂနက်ရှိ သံလိုက်နယ်သည် လည်ပတ်လျက် ရှိသည့်အတိုင်း အာမေချာရှိ သံလိုက်နယ်သည်လည်း လိုက်၍ လည်ပတ်ရသည့်အတွက် အာမေချာလည်ရလေသည်။ ဤမိုတာမျိုးကို လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်၍ လျှပ်စစ်နာရီကဲ့သို့ အိမ်သုံးပစ္စည်းများတွင်အသုံးများကြလေသည်။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လျှပ်စစ်မိုတာ&oldid=723913" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။